Pregnancy + 5.3.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.3.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ Pregnancy +
Pregnancy + ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကိုယ်ဝန် app ကိုယနေ့ Download!
သင်သည်သင်၏ကလေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိုခြေရာခံနိုင်အောင်ကိုယ်ဝန် + ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုနေ့စဉ်ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများ, မိခင်စောင့်ရှောက်မှုအကြံပေးချက်များနှင့်အပြန်အလှန် 3D မော်ဒယ်များပါရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ဝန် app ကိုမိသားစုများမျှော်လင့်နေဖြင့်သန်း 25 ကျော်ကြိမ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်, ဒါကြောင့်မိဘများ-to-ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိုင်းအဝိုင်း join ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် tracker app ကိုဒါကြောင့်သင့်လက်တွဲဖော်, အနာဂတ်အတွက်အဘိုးအဘွားနှင့်သင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဟာပျော်စရာတွင် join လို့ရပါတယ်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ပါသည်။ ဒီ app နှင့်အတူ, သူတို့အမိဝမ်း၌သင်တို့၏ကလေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိုလိုက်နာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ app ကို download မှသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ဖြင့်သင့်ကိုယ်ဝန်နှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။
ဒီ app အပါအဝင်သင်လိုအပ်သမျှကို, features:
- (Blastocyst ကနေသန္ဓေသားမှကလေးသို့) သင့်ရဲ့ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖေါ်ပြသည် Interactive မှ 3d & Models
- မွေးကင်းစကလေးငယ် Size ကို Visualiser: သစ်သီးများ, တိရစ္ဆာန်များမွှေးအတွက်သင့်ကလေးရဲ့ Size ကိုခြေရာခံ
- Daily သတင်းစာကိုယ်ဝန်အင်ဖို
- Kick ကောင်တာ
- စာချုပ် Timer
- ကိုယ်ဝန်အလေးချိန် Log in ဝင်ရန်
- သင်အဆိုပါ 3rd သုံးလပတ်ကာလအတွင်းပြင်ဆင်ပါကိုကူညီပါဖို့ဆေးရုံ Bag Tool ကို
- မွေးကင်းစကလေးငယ်အမည်များ 1000
- ကိုယ်ဝန်ကြောင့်နေ့စွဲ Calculator ကို
- သင်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်း၏ Track သိမ်းဆည်းထားပါမှကိုယ်ဝန်ဒိုင်ယာရီ
- Daily သတင်းစာ Blog ရေးသားချက်များ
သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျထွက်ရှိပါတယ်ကိုယ်ဝန်အကြံဉာဏ်ကိုပမာဏအားဖြင့်လွှမ်းမိုးခံစားနေပါက, စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝန် tracker app ကို Download လုပ်ပါနှင့်ကိုယ်ဝန် + app တွေတပတ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းညွှန်ကြကုန်အံ့။ ဒီ app ကသင်၏ကလေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်သင်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်ကကိုယ်ဝန်မှတစ်ဆင့်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးကျန်းမာနေဖို့ကူညီပေးပါမည်။
နောက်ကျောကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အမြင်အာရုံကိုယ်ဝန်ဒိုင်ယာရီဖန်တီးရန်သင့်ကြီးထွားလာဖု၏ဓါတ်ပုံများကို Upload လုပ်ပါ။ လှုံ့ဆော်မှုဘို့ငါတို့ကလေးအမည်ဖြင့်ဒေတာဘေ့စရှာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း, အစားအစာနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုမိခင်တွေလည်း-to-ဖြစ်ဘို့အကြံပြုနေကြတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ သင်မျှော်လင့်နေသည့်အခါရှောင်ရှားရန်အဘယ်အရာကို, သင့်မီးဖွားခွင့်ကိုစတင်တဲ့အခါမှာပေါ်အကြံပေးချက်များဖတ်ပါ, ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိခန္ဓာကိုယ်ချော့မော့ဖို့သားဖွားအဝတ်ကိုရှေးခယျြဖို့။ အဆိုပါကိုယ်ဝန် + App ကိုယနေ့၌ဤသူအပေါင်းတို့နှင့်ပိုပြီးရှာဖွေပါ။
ဤသည် App ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုအစားထိုးရန်။ Philips ကစားသုံးသူလူနေမှုပုံစံစတဲ့ B.V. သာမဟုတ်, ကိုယ်ပိုင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်တစ်ခုအစားထိုးအဖြစ်အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်အခြေခံပေါ်တွင်သင်ပေးသောဤအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ. ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ချက်များအဘို့မဆိုတာဝန်ယူမှု disclaims ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ဝန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သားဖွားဆရာမနှင့်အတူတိုင်ပင်။
အဆိုပါကျန်းမာရေး & မိဘအုပ်ထိန်းမှုအဖွဲ့ကသင်တစ်ဦးကျန်းမာ full-သက်တမ်းကိုယ်ဝန်နှင့်လုံခြုံပေးပို့ဆန္ဒရှိသော်လည်း။
Pregnancy + အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pregnancy + အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Pregnancy + အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Pregnancy + အား အခ်က္ျပပါ
lamune စတိုး 49.32k 14.72M
Pregnancy + ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Pregnancy + အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.3.2
လက်မှတ် SHA1: DB:3F:08:B8:E6:6C:39:BD:A7:82:BC:17:47:F0:F3:C2:C1:39:32:FC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): pregnancy
Pregnancy + APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ